Sudoku 🥇 Gali oo ku raaxee emulator.online
exercises waa ciyaar u eg xujo tiro. Waxay kicineysaa caqli-gal xisaabeed iyo feker istiraatiiji ah. Marka ugu horeysa waxay umuuqataa mid aad u dhib badan, laakiin waxaad arki doontaa inaad laylis yar sameyso, adigoo og xeeladaha kuhaboon, maalin kasta way sahlanaan doontaa oo madadaalo badan laheyd.
Sudoku: sida loo ciyaaro talaabo talaabo 🙂
Waxaad ka heli doontaa a laba jibbaaran oo weyn oo loo qaybiyay dhawr god oo yaryar, iyo fagaarayaashaas yar-yar ayaa loo qaybiyay laba jibbaarane. Fagaare kasta oo dhexdhexaad ah wuxuu ku dhexyaalaa 9 god oo yaryar.
Ujeeddada ciyaartu waa in lagu buuxiyo godadka madhan ee tirooyin, si:
Khadadka oo dhan (jiifsan) waxay leeyihiin dhammaan lambarrada 1 illaa 9, adigoon midna ku celin.
Dhamaan tiirarka (taagan) waxay leeyihiin dhammaan lambarrada 1 illaa 9, adigoon midna ku celin.
Dhammaan fagaarayaasha dhexe waxay leeyihiin dhammaan lambarada min 1 ilaa 9, iyagoon midna ku celin.
Waa maxay Sudoku?
Jabaan wanaagsan, magaca aan wada ognahay ma aha wax ka badan fududeynta weedha "suji wa dokushin ni kagiru", waxa loola jeedaa "lambarradu waa inay ahaadaan kuwo gaar ah"Waxaana loola jeedaa waqti aad u fudud oo waqti firaaqo ah oo leh tilmaamo aad u fudud oo ujeeddadeedu tahay in la buuxiyo dhammaan sanduuqyada madhan iyada oo loo marayo isku xigxiga tirooyin nidaamsan. Taasi waxay u baahan tahay caqli gal iyo sababayn xallinta
Taariikhda Sudoku 🤓
In kasta oo magaceeda, sudoku laguma abuurin Japan, hal-abuurka waxaa loo aaneynayaa xisaabiyihii reer Switzerland Leonhard Euler. Qarnigii XVIII, wuxuu abuuray wuxuu ugu yeeray "fagaaraha latin", ciyaar ay tahay in tirooyinka ay ka muuqdaan kaliya hal mar saf kasta iyo tiir walba. 9 saf iyo 9 tiir caan noqotay markii bilaabay in lagu daabaco Mareykanka. Sanadihii 1970-naadkii.
Waxay ku jirtay gudaha 1984, markii Jabbaan Maki Kaji ayaa la kulmay ciyaarta. Markii uu ku noqday wadankiisii, Kaji ayaa ciyaarta hagaajiyay (Wuxuu siiyay lambarada tilmaanta, oo horeyba uga muuqday sanduuqa, isla markaana abuuray darajooyin kala duwan oo dhib ah, baabtiisay oo u rogay qandho ka dhex jirta dadka ay isku waddanka yihiin: maanta Japan waxay leedahay in ka badan 600,000 joornaallo ku takhasusay Sudoku.
Galbeedka, khamaarku wuxuu ku waashay 2005. Tallaabadii ugu horreysay waxaa la qaaday 1997, markii New Zealander Wayne Gould wuxuu booqday Japan, wuxuu bartay Sudoku wuxuuna sameeyay barnaamij kombuyuutar ciyaarta, oo la sii daayay 2004. 8 bilood ka hor, curinta ciyaarta wuxuu bilaabay inuu maalin walba soo daabaco wargeyska The Times, kaasoo isla markiiba ay soo raaceen tartan adduunka oo dhan ah.
Noocyada sudoku marka lagu daro midka caadiga ah:
Diagonal: Si aad u ciyaarto, waa inaad raacdaa isla shuruucda Sudoku dhaqameed, taas oo ah, dhammaystir dhammaan jidadka adigoo adeegsanaya lambarrada 1 illaa 9, adigoon ku soo celin xariiqyada jiifka iyo toosan Muuqaalka ugu wanaagsan ee halxiraalaha sudoku ayaa ah, marka lagu daro isku xidhka xarriiqyada toosan iyo kuwa toosan, waa inaad sameysaa laba jaantusyo dhexe oo sameysma X, oo leh lambarro 1 illaa 9 iyo inaysan iyagu is-celin.
Isbedel la'aan: waxay leedahay xeerar la mid ah kuwa caadiga ah, marka laga reebo in fagaarayaasha ay yihiin kuwo aan caadi ahayn.
Kakuro: Cayaarta kakuro ma ahan wax aad u adag, in kastoo loo arko inay ka dhib badan tahay sudoku. Ujeeddadu waa in la dhigo lambarada 1 illaa 9 si aan ugu celcelin sadarka xariiqda iyo safka safka, iyadoo ay lama huraan tahay in wadarta tirooyinku (si toos ah ama xagal ah) ay u siman yihiin barta la xidhiidha .
Dila: waa isku darka Sudoku iyo Kakuro. Sidaa darteed, waxaa jira aagag xaddidan oo aan lagu hayn karin tirooyin soo noqnoqda oo wadartoodu tahay inay bixiso qiimaha la tilmaamay.
Megasudoku: waa inaad ka dhigtaa lambarrada 1 illaa 12 inay soo muuqdaan hal mar oo keliya saf kasta, sadarka, iyo laba jibbaarada. Waxay la mid tahay ta soo jireenka ah laakiin waxay leedahay saddex lambar oo dheeri ah.
Minisudoku: Waxay kaga duwan tahay tii hore iyadoo ka kooban tiro yar oo laba jibbaaran.
Multisudoku: Waxay ka kooban tahay dhawr xujooyin sudoku ah oo marka la isku daro ka kooban hal.
Tilmaamaha lagu xaliyo Sudoku 🙂
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo si loo bilaabo xallinta Sudoku waa dooro qaab aad ku hagto (saf, sadar ama laba jibbaaran) Hadaadan mid qudha dooran oo aad isku daydo inaad wax walba hal mar wada qabato, waxaad ku dambayn kartaa isku shaandhayn iyo isku qasid wax walba, taas oo waqti badan kugu qaadan doonta ciyaarta.
Dheh, tusaale ahaan, waxaad dooratay inaad ku bilowdo xallinta khadadka. Kadib waxaad falanqeyn doontaa sadarka ugu horeeya ee jiifka ah oo waxaad arki doontaa tirooyinka horeyba ugu yaal iyo kuwa maqan Ku buuxi fagaaraha madhan lambarrada maqan, fiiro gaar ah u yeelo tirooyinka ku jira safka si aad u hubiso in uusan dib isu soo celin.
Kadib xalinta safka koowaad, tag sadarka labaad oo ku celi hawsha. Eeg tirooyinka aad horey u haysatay iyo kuwa maqan ee aad ku bilaabi karto buuxinta. Haddii aadan haysan lambarka 1 ee safka labaad, tag fagaaraha koowaad ee madhan oo qor 1. Kadib fiiri sadarka laba jibbaaran. Haddii nambarka 1 uu horeyba uga jiray sadarkaas, ka saar oo ku qoro midka 1-aad barxad kale. Xusuusnow inaad markasta hubiso haddii aadan ku celinayn lambar kasta oo horey ugujiray fagaaraha.
Raac laxanka ilaa dhamaadka, oo waad dhisi kartaa ciyaartaada Sudoku. Ugu dambeyntiina, way sii adkaaneysaa in la helo meel ku habboon lambarrada iyada oo aan lagu celin, laakiin wax waliba waxay isku dayayaan inay beddelaan lambarrada goobta si ay u fududaato.
Sudoku: xeelado 🤓
Halkan waxaa ku yaal tilmaamo iyo xeelado fudud oo kaa caawinaya inaad xalliso xujo Sudoku.
Iyada oo leh Noocyo
Isticmaalka astaamaha, waxaad isticmaali kartaa talooyinkan aadka u fudud (iyo xitaa iska cad):
Meel kasta ha noqotee, si dhow ula soco ciyaarta unugyada kaliya ku leh hal lambar calaamadaha. Tani waxay muujineysaa inay jirto hal suurtagal oo keliya unugaas.
Lambarka qarsoon oo keliya
Inta badan si dhow u fiirsada, waxaad ka heli kartaa "lambar qarsoon oo keliyaLambarkan uma muuqdo oo keliya calaamadaha. Waa musharraxa kaliya ee suuragalka ah ee safka, sadarka ama 3x3 shabaqa, waxay ka muuqataa oo keliya dhexda lambarro kale. Fiiri sawirka dhinaca:
Sawirkan, waxaad ku arki kartaa in lambarada 1 iyo 8 ay hal mar oo kaliya ka muuqdaan shabagyadooda 3x3. Tani waxay muujineysaa inay qasab tahay in la dhigo boosaskaas.
1. Haddii waqti kasta oo aad ka hesho isla lambarada oo keliya astaamaha koox (saf, sadar ama shabag), macnaheedu waa lammaanahaani waa inay daruuri ka muuqdaan labadan unug. Hoos ka daawo sawirka:
2. Sawirkaan waxaan ku aragnaa in lambarada 1 iyo 3 ay kaligood ka muuqdaan laba unug, marka waa in loo adeegsadaa unugyadaas. Kaliya ma naqaano tirada ku jirta unug kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaan ognahay in lambarrada 1 iyo 3 aysan ka dhex muuqan karin unugyada kale ee madhan. Sidaa darteed, waxaan kaliya ku leenahay mid kasta fursad.
Kuwa aan dooneynin inay adeegsadaan noocyada, waxaan u sharixi doonnaa istiraatiijiyad aad u fudud oo aad u faa'iido badan.
Farsamada xarriiqda iskutallaabtu waa suurtagal waxa ugu horeeya ee dadku bartaan markay ciyaarayaan Sudoku. Ciyaartoydu waxay wax ku bartaan wax qabad, maxaa yeelay waa wax fudud oo aasaasi ah.
Dhexdeeda, ciyaartoygu waa inuu doortaa lambar (badiyaa midka ugu badan ee ciyaarta ku jira) oo ku sawiro khadad khayaali ah khadadka iyo tiirarka tiradaasi ku jirto.
Tusaalaha soo socda, waxaan dooranay nambarka 9. Waxaan helnaa dhamaan meelaha ay ku yaalliin waxaanan ku sawireynaa khadadka khayaaliga ah ee khadadka iyo tiirarka si aan u muujino in nambarka 9 aan lagu dhejin karin boosaskaas. Marka tan la sameeyo, waxaan ku calaamadeyneynaa boosaska bilaashka ah ee cagaaran.
Nota : Waxaa muhiim ah in la ogaado in unugyada maran qaarkood, in kasta oo aan lagu tirtirin khadadka khayaaliga ah, looma calaamadin bilaash maxaa yeelay waxay leeyihiin lambarka 9 isla shabakadda 3x3.
Marka la falanqeeyo jagooyinka bilaashka ah, waxaan ku arki karnaa in shabakada dhexe ee 3x3 ay jirto hal boos oo bilaash ah oo lambarka 9 ah, sidaas darteed waxaan ku dhejin karnaa booskaas.
Marka tan la dhammeeyo, waxaan ku celcelinaynaa geeddi-socodka xariiqyada dhalanteed ee tirada aan hadda dhignay Hubi natiijada:
Haddana waa inaan falanqeynaa jagooyinka bilaashka ah ee raadinta dhaqdhaqaaq cusub. Sida aan aragno, shabakadda hoose ee hoose waxaa ku yaal hal boos oo bilaash ah. Kadibna waxaan dhigi karnaa lambarka 9 oo aan ku celin karnaa nidaamka kor ku xusan.
Markan hal boos oo bilaash ah ayaa ka muuqday geeska bidix ee hoose, markaa waxaan 9 ku dhignay booskaas oo waxaan kusii wadnay istiraatiijiyaddii.
Hadda waxaan arki karnaa inaan haysanno afar boos oo bilaash ah lambarka 9, midkoodna midna kuma gaar ahaado shabakadda 3x3 ee ay ku jirto. Sidaa darteed, garan mayno halka la dhigo 9 iyadoo la adeegsanayo xeeladdan kaligeed.
Hal dariiqo oo suurtagal ah ayaa ah dooro lambar cusub oo ku celi istaraatiijiyaddan hadda lagu sharraxay. Waxaad u badan tahay inaad awoodi doontid inaad buuxisid unugyada badankood adoo adeegsanaya istiraatiijiyaddan.
Hadda oo aad xeelado leedahay, raaxeeyso oo jimicsi maskaxdaada adoo ciyaaraya Sudoku.🙂
Sudoku waa ciyaar u baahan xoogaa waqti iyo fikir ah, laakiin markii aad ogaato xeerarka, waxay noqoneysaa mid si fudud macquul u ah in la ciyaaro.
Sudoku guud ahaan wuxuu ka kooban yahay miis 9x9 ah, oo ka kooban 9 shabakadaha, in leeyihiin 9 unugyo siday u kala horreeyaan.
Fikradda ugu weyn ee ciyaartu waa ciyaaryahanka miiska waa inaad ka buuxisaa tirooyinka 1 illaa 9, adigoon ku soo celin lambarro isla xariiq ama shabag.
Haddii aad raacdo dhammaan sharciyadan oo aad maamusho inaad buuxiso miiska, markaa ciyaarta ayaa guuleysatay!
Miisaska Sudoku ayaa loogu talagalay inay yeeshaan hal xal Iyo sida oo kale, waa wax caadi ah inaannaan saxin markii ugu horraysay.
Sababtaas oo kale awgood, ciyaartooyda badankood waxay doorbidaan inay lambarrada ku qoraan qalin si markaa loo tirtiri karo haddii ay qalad sameeyeen.
Soo jeedin kale oo laga fiirsado ayaa ah isticmaalka calaamadaha ganacsiga. Calaamadaha, waxaan ula jeednaa qorista fursadaha kala duwan ee unug kasta. Taasi waa, haddii unug uu yeelan karo lambarrada 3 iyo 9, waxa ugu habboon waa in lagu muujiyo (cabbir yar) labada lambar oo la xalliyo inta ka hartay miiska, illaa laga gaarayo lambarka u dhigma unuggaas.
Noocyada qaarkood ee Sudoku, astaamahan yaryar horay ayaa loogu soo daray jadwalka, si loo fududeeyo xallintooda. Noocyadan horeyba ugu jira calaamadaha, waxaa jira tabo qaarkood oo kaa caawin doona inaad xalliso xujada:
Mar kasta oo miis Sudoku ah (oo leh calaamado) waxaad ka heli kartaa lambar keliya hal unug, kani waa a tilmaan in ay jirto hal suurtagal oo keliya isla unuggaas, taasi waa, waa inaad isla markiiba wacdaa lambarka qolka.
Sudoku mararka qaar waxay noqon kartaa ciyaar adag, laakiin waxaa jira xeelado yar yar oo naga caawiya inaan ogaanno ciyaarta. Tusaale ahaan, ciyaaraha ay astaamo ka jiraan, waxaan mararka qaarkood ka helnaa waxa loogu yeero "lambar qarsoon oo keliya".
Lambarkan kama muuqan un unugga (oo ay weheliyaan lambarro kale), laakiin waa musharraxa keliya ee suuragalka ah ee safka, safka ama shaxda 3x3.
Taasi waa, markay ku jirto shaxda 3x3, tusaale ahaan, nambarka 3 ayaa soo muuqda mana ka muuqdo unug kale oo shabaqaas ka mid ah, markaa waa tilmaame in lambarka 3 uu ka tirsan yahay isla unuggaas.
Ilaa iyo inta aad ka helayso lambarada lambarada oo keliya calaamadaha aaladda 3x3, markaa waxay ka dhigan tahay in labadan lama huraan waa inuu ku jiraa labadan unug, su’aasha kaliya ee halkaan ku soo korortaa waxay tahay midkee ayuu noqon doonaa mid kasta.
Haddii noocaaga Sudoku uusan la imaanin calaamado ama haddii aadan rabin inaad adeegsato calaamado, waxaa jira istiraatiijiyad kale oo aad u fudud oo kaa caawinaysa inaad la qabsato kulankaan.
Farsamooyinka xarriiqda iskutallaabta ayaa si ballaaran loo adeegsadaa, iyadoo ay ugu wacan tahay fududaanta adeegsiga. Waxay ka kooban tahay Xulo tirada ka muuqata inta badan miiska oo dhan oo sawir (qalin si aan lagu wareerin) Khadadka safafka iyo tiirarka ay lambaradaas lamidka ah ku xiran yihiin.
Ka dib markaan xariiqnay khadadka oo dhan, waxaan u gudbeynaa marxaladda calaamadeynta unugyada aan ku jirin isla xariiqyadaas. Kadibna, waa la falanqeynayaa 3da grid ee aan laheyn nambarka 3 iyo kuwa leh boos (aan laga bixin) si loo dhigo.
Mar haddii tan la sameeyo, xulo lambar kale oo ku celi isla xeeladahaas, ilaa dhammaan unugyada la buuxiyo. Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso haddii ay jiraan lambarro ku soo noqnoqonaya isla xariiq ama shabag. Haddii aysan jirin tirooyin soo noqnoqda, markaa ciyaarta waa la guuleystay.
Waqti ciyaar iyo dhib
Ma jiro waqti ugu badnaan xujo kasta oo Sudoku ah, ciyaaryahan walbana wuu ku raaxeysan karaa ciyaarta inta ay iyagu doonayaan.
Ciyaar Sudoku way kala duwanaan kartaa 5 ilaa 45 daqiiqo, laakiin waxay kuxirantahay dhamaan waaya aragnimada ciyaaryahanka iyo heerka dhibka ciyaarta. Si fudud haddii loo dhigo, markasta oo ciyaarta ay sii adkaato, ayaa loo baahan yahay sababaynta badan, sidaa darteed ciyaarta ayaa waqti dheer qaadan doonta.
Sida dhibaatada, badiyaa waa ku cad tahay cinwaanka websaydhka ama majaladda. Waxaa jira ciyaaro sahlan oo loogu talagalay dadka bilowga ah oo aad ugu adag ciyaartoy khibrad leh. Xeeldheerayaasha, heerarka aadka u adag waxay runtii noqon karaan kuwo dhib badan, maaddaama heerarku bilaabeen inay u muuqdaan kuwo aad u eg, oo tirooyinka ay u muuqdaan inay ka muuqanayaan Sidaa darteed, marka lagu daro sababaynta aasaasiga ah, sidoo kale waxaad ubaahantahay istiraatiijiyad cayiman.
Oo sidaasuu maqaalka ku soo gabagabeynayaa. Hambalyo! Hadda waad taqaanaa sida loo ciyaaro Sudoku, ama ugu yaraan waxaad leedahay aqoon kugu filan oo aad ku xallin karto xujooyinkaas!